Pesta Toamasina : raikitra ny ady faty tao amin’ny hopitaly | NewsMada
Pesta Toamasina : raikitra ny ady faty tao amin’ny hopitaly
Raikitra ny korontana tao amin’ny hoptaly Morafeno ao Toamasina ny talata alina teo rehefa matin’ny pesta ny renim-pianakaviana iray ka nogiazan’ny hopitaly ny razana. Tsy nanaiky ireo fianakaviana ka nanao amboletra haka ny fatin-dreniny.
Nikiry mafy ireo fianakaviana mba amoahana ny razana hokarakarain’izy ireo amin’ny fandevenana. Tsy nanaiky hatramin’ny farany anefa ny mpiasan’ny hopitaly satria tsy maintsy raisina ny fepetra amin’ny fikarakarana ny razana misy areti-mifindra toy izao.
Tonga hatramin’ny fidinan’ny Emmo Reg teny amin’ny hipitaly mihitsy nifehy ireo fianakaviana nanao bontolo haka ny razana misy pesta. Nandray an-tanana ny fikarakara ny razana kosa ny hopitaly mba tsy iparitahan’izany aretina izany amin’ireo fianakaviana sy ny mponina ao Toamasina.
Iray fihaviana amin’ny loholona any an-toerana ilay renim-pianakaviana matin’ny pesta ka nampirisika ireo olona ireo haka ny razana tsy misy fepetra izany loholona izany raha ny fanazavan’ireo nanatry maso.
Henjana ny fifandirana teo amin’ireo tompon’ny razana sy ny tompon’andraikitry ny hopitaly. Nanaiky ny fandaminana ihany anefa ireo fianakaviana rehefa niantsehatra ireo mpitandro filaminana.
Renim-pianakaviana 70 taona ity voaporofo fa matin’ny aretina pesta tao Toamasina ny talata alina teo ity. Notsaboina tao amin’ny hopitaly manara-penitra ao Morafeno Toamasina izy ny talata hariva. Monina ao amin’ny fokontany La poudrette ity renim-pianakaviana ity ary avy any Fenoarivo Atsinanana. Tsy azon’ny fianakaviana novangiana intsony ny marary nanomboka tamin’ny 10 ora maraina.
Tsiahivina fa vao tamin’ny herinandro no nisy olona roa matin’ny pesta tany Toamasina. Mitohy hatrany ny fiparitahan’ny aretina fa tsy voafehy araky ny filazan’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka matoa mbola misy ny marary sy maty.
Milaza ny hitondra vaovao mikasika ity aretina pesta ity ny minisiteran’ny fahasalamana androany.